Manamboara milina misy foam - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer >> Manamboara milina mandrehitra
Manamboara milina mandrehitra
Valentin Angle, andefaso sary izahay miaraka amin'ny fanazavana ny fivorian'ny sy ny fananganana milina fanaovana foam.
Faly tokoa izahay noho ny fandraisana anjara amin'ny fahafantarana fa kely ny fotoana anananao, koa ankafizo ary raha misy olona manana hevitra vaovao hahitana raha azo hatsaraina.
FIZARANA NY MAMINA MANAO FOAM
Firaisana eo anelanelan'ny siny sy siny hosodoko (manan-danja io teboka io, hazavaiko izany)
T misy venturi effets (afangaro savony sy rano)
Fifandraisana amin'ny fantsona.
Tube fantsakana savony
Manatanteraka ny fivorian'ny savony sy ny rano mampiasa fifandraisana amin'ny fantsom-pifandraisana izahay dia manampy paompy ½ santimetatra (manome antoka ny fikorianan'ny rano faran'izay betsaka).
dia (Sary 1) mampifandray T (karazana ampiasaina amin'ny fifandraisana butana) izahay ary noho ny endriny dia afaka mampiditra siligaoma heater (b) isika, izay nanitaranay kely ny lavaka. Ity rafitra ity dia mamela ny vokatry ny venturi rehefa mandalo ny siligaoma ny rano mba handraoka ny savony avy (a).
Aorian'ny T dia mila manamboatra gadget hafa isika izay hampifandraisintsika araka izay farany alehantsika, na lahy na vavy. Izy io dia momba ny fanaovana tandroka varahina 2-savaivony (sary 22) amin'ny faran'io dia hametraka kiho 2 amin'ny 22 ka hatramin'ny vehivavy isika. Amin'ity fotoana ity dia mila mametraka zavatra ianao vao vita ny fampifangaroana tsara ny savony sy ny rano. Tao amin'ny trano fanatobiana entana izay mivarotra milina fambolena, dia nahita diffusers sasany izay sombiny 2 aho. Ny iray dia seramika misy endrika boribory sy ny tendrony, ny spiral ihany no napetrako.
Farany amin'ny teboka 2 (fihaonan-doha eo anelanelan'ny siny fikororohana sy ny siny fandokoana) dia apetraka ny harato, toy ny harato moka, napetrako teo amin'ny 3 sosona ny harona tongolo plastika.
Savony Nampiasako ny zava-drehetra avy amin'ny shampoo, gel, mpanasa vilia, savony izay ampiasain'ny mpamono afo, sns… Ny shampooing mandaitra sy tsy manimba indrindra izay tsy mahasosotra ny maso. Ny refy, savony tavoahangy sy tavoahangin-drano, (ary ampahefatry ny tavoahangy Fairy) satria ny fangaro dia tokony ho ranoka entina Tsy nitaraina momba ny mangidihidy ny ankizy.
Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny tsindry rano tsara, satria tsy handraoka ny savony izy io, na dia azonao atao aza ny mampiakatra ny tavoahangy savony ka kely ny vidin'ny fandraisana.
Avy amin'ny bilaogin'i Valentine Angulo ary araka ny efa nolazaiko teo dia avela ny soso-kevitra hanatsarana.
Ahoana ny fanaovana batterie azo averina
Fanehoan-kevitra 46 momba ny "fananganana milina fanosotra"
13 martsa 2009 amin'ny 5:57 hariva
Ny vahaolana dia rano sy savony 50%
13 martsa 2009 amin'ny 6:22 hariva
Roobre, mampiasa an'io raikipohy io ve ianao? Tsy azoko,
Triethanolamine Lauryl Sulfate 65%
Diethanolamine voanio% 10
Tetrasodium EDTA 5%
13 martsa 2009 amin'ny 8:44 hariva
Natolotr'i val1966 tamin'ny Tue, 2009-01-06 10:37
Izany no antony tsy maintsy afangaro amin'ny 50%. Ilay iray ampiasain'ny mpamono afo dia efa simba. Fa ny shampoo na ny fanasana vilia dia nanalefaka 50%.
Azonao atao ny manandrana ny fomba roa;)
25 martsa 2009 amin'ny 6:15 maraina
Tsy nohazavainao ny tsiambaratelon'ny firaisana amin'ny vatan'ny loko sy ny fikosehana ary aiza no alehan'ilay maya costal sary hafa azafady azafady azoko atao ihany koa ny mifangaro efa nararaka anaty tanky ary alefako amin'ny paompy, ny venturi dia ilaina ary nahoana
25 martsa 2009 amin'ny 9:48 maraina
Voalohany indrindra dia misaotra betsaka tamin'ny fanazavana. Tsy nahita tranokala iray aho manazava izany. Saingy tsy manazava ny tenako amin'ny zavatra roa aho:
- Manana fantsom-pifandraisana mifangaro amin'ny fidiran'ny rano amin'ny tendrony iray sy amin'ny "T" amin'ny faran'ny iray isika.
- Ny fidirana hafa amin'ny «T» no vahaolana amin'ny foam.
- Amin'ny fivoahana, ary eto ny fanontaniako, tsy fantatro izay hifandraisantsika. Tsy dia azoko tsara ny momba ny tandroka. !!!
- Farany, ny fifangaroan'ny zava-drehetra dia tonga amin'ny diffuser izay manondro mankany amin'ny harato ary ny mpankafy no mitandrina ny ambiny.
Fanontaniana roa. Tena mivoaka ve ny sombin-javatra tsara be? Ahoana no ahafahantsika manatsara ny famoronana foam? Aiza no ahazoako savony manokana hamoronana sombin'ity karazana ity?
Ambonin'ny zava-drehetra dia liana amin'ny fivorian'ny masinina aho, izany hoe, inona ny elanelan'ny T sy ny diffuser. Miarahaba sy misaotra an'ireo rehetra mamaly
5 aprily 2009 amin'ny 9:08 hariva
Miala tsiny aho fa tsy afaka manazava bebe kokoa amin'ny fanazavana. Ao amin'ny bilaogy http://valentinangulo.blogspot.com/ Nandefa ny drafitr'ilay lohahevitra "tandroka" sy ny hafa aho.
Raha vantany vao entina eto amiko ilay masinina, dia esoriko izy ary omeko fahafaham-po ny fahaliananao.
Tsy ho noeritreretiko velively hoe manaitra ny fahalianana izany satria tsy nandefa mailaka momba izany fotsiny aho.
23 Jolay 2009 amin'ny 12:11 hariva
Misy manana sarintany na sary amin'ny antsipiriany ve, na fanazavana mazava kokoa ..?
27 Jolay 2009 amin'ny 6:44 hariva
Misy manana sary mampiseho ny fifandraisana ve, mba hahafantarako tsara anao!… Alefaso azafady charlypinaple@hotmail.com
27 Jolay 2009 amin'ny 8:50 hariva
Jerevo aho, toa sarotra ny endrinao ao amin'ilay fangaro amin'ny foam sy rano, jereo ny tolo-kevitra iray, manana endrika hafa tena tsotra aho, mila kaontenera feno rano ianao, ao no afangaroo mivantana amin'ny paompy kely ny foam. Mitifitra ny fangaro ao anaty ianao. avy amin'ny barika io fangaro io dia handeha ho any amin'ny reducer karazana shiglor mba hifehezana ny habetsaky ny ranoka ary tsy ho very maina amin'ny herin'ny mpankafy ary ny vokatra noforonin'ny harato dia novokarin'ny busa ary misaotra ny herin'ireo rivotra entina entina mandroaka azy mankany amin'ny harato mamokatra sombin-javatra ary miaraka amin'izay manome ny vokatr'ilay tafondro rehefa mandroaka ny sombin-tsofina amin'ny alàlan'ny fiarahabana lehibe avy any Ekoatera tochos dj raha misy mila famolavolana hafa saingy avy amina masinina vita amin'ny rivotra izay tena tsara dia ity ny mailako luismidjec@hotmail.com
5 Aogositra 2009 amin'ny 7:04 hariva
Ho mora kokoa izany ... fa amin'ny fanazavanao dia tsy dia mazava loatra, andramo ny mametraka fe-potoana "koma" sy ny hafa.
22 Oktobra 2009 amin'ny 5:54 maraina
Tsara alina namana iray fanontaniana, io raikipohy io koa dia miasa ho an'ny milina manjavozavo sy ny oram-panala
2 martsa 2010 amin'ny 6:26 maraina
ary ilay bubble?
19 Jolay 2010 amin'ny 6:40 maraina
Ary tsy manimba ve ity firafitra ity? azoko ampiasaina amin'ny fetin'ny ankizy ve izany?
20 Oktobra 2010 amin'ny 7:58 alina
Efa manana ny singa rehetra aho
Tetrasodium EDTA vovoka 5%
Ohatrinona ny rano ahena amin'izany?
8 Novambra 2010 amin'ny 7:43 hariva
Salama, Miguel no anarako, tsy hanana drafitra momba ny fanaovana azy ianao, hividy azy ho anao aho, misaotra gamarra_miguel@yahoo.com.ar
22 Desambra 2010 amin'ny 3:10 alina
Io masinina io, iza no manao azy: foam na mandrora foam? Satria, avy amin'ny sary, inona ilay sombin-javatra mampihoron-koditra ...
13 Desambra 2010 amin'ny 3:33 alina
Ahoana no fomba afangaroako amin'ny rano 600 litatra?
30 Jolay 2012 amin'ny 4:53 hariva
Salama namana, manandrana miditra ny bilaoginao aho ary tsy avelanao handeha aho, azafady azafady manasa ahy azafady, liana aho mahita ny lohahevitr'ilay milina busa. ricardobracho0@hotmail.com
3 Oktobra 2012 amin'ny 12:00 maraina
Ahoana ny amin'ny bro, ity milina faran'izay tsara ity, azonao atao ve ny manasa ahy amin'ny bilaoginao. Te hahafantatra bebe kokoa momba an'io lohahevitra io aho.
ny mailako dia: malev1989@gmail.com
15 Jona 2013 amin'ny 2:44 hariva
azonao atao ve ny mamela ahy hiditra ao amin'ny bokinao meccorbi@gmail.com
8 Janoary 2020 amin'ny 4:08 hariva
Salama, te hahafantatra ny raikipohy momba ny milina fanala aho, misaotra
16 septambra 2011 amin'ny 11:34 alina
23 Desambra 2013 amin'ny 5:25 alina
Inona no karazana mpankafy mandeha, amin'ny resaka revolisiona sy ireo andinindininy ireo, heveriko fa hiovaova arakaraka ny herin'ny mpankafy izany, sa tsy izany?
Respoecto amin'izay novakiako, mialoha ahy kokoa ny mampifangaro ny vahaolana rehetra ary avy eo handefasana azy ho paompy, tsy maintsy lafo kely kokoa (ho an'ny paompy) fa azo ampiharina kokoa amin'ny fotoana farany heveriko.
Arahaba, bloog tsara
11 Mey 2014 amin'ny 10:02 hariva
manasa ahy azafady aku1972@hotmail.com
23 Mey 2014 amin'ny 3:40 maraina
Toa ahy fa ilay milina resahina dia manatanteraka tsara ny tanjony. Tsy afaka ny tsy hiarahaba ny mpamorona azy aho. Ny fanazavana ny fomba fananganana azy ... tsy ratsy fa tena ratsy. Ny antsipiriany momba ny fomba hanaovana fifandraisana plumbing anatiny dia tsy omena. Tsy voalaza hoe inona ny karazana harato ampiasaina. Tsy voalaza ny halaviran'ny diffusers amin'ny harato. Mikasika ny mpankafy (izay mpankafy axial) dia tsy misy famaritana teknika omena. Farafaharatsiny manondro ny fikorianan'ny rivotra sy ny herin'ny motera. Mikasika ny tsipelina… maharikoriko. Ny vokatra mamorona ny foam dia "foam foam" fa tsy "foam foam". Siligaoma ny siligaoma. Ny ampahany apetraka hamokarana ny vokan'ny Venturi dia antsoina hoe nozela na, mahazatra kokoa: "jet". Ankehitriny, inona no holazaina momba ireo izay manoratra manao fanehoan-kevitra na mangataka vaovao. Ny ankamaroany dia toa nandeha tany am-pianarana nandritra ny fialan-tsasatra madio.
Saingy misy vahaolana io rehetra io. Ny mpanoratra ity pejy ity dia afaka mandinika azy io ary manao ny fanitsiana mahitsy. Manaova drafitra koa, na dia freehand aza, manondro ny halavirana, ny savaivony ary ny toerana misy ireo singa tafiditra ao.
Miala tsiny fa nangidy be tamin'ny hevitro. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy maneho ny fankasitrahako an'ireo izay miezaka manampy ny hafa aho. Mendri-piderana izany. Miarahaba anao.
Marcelo sy Ricardo
27 Mey 2014 amin'ny 5:33 maraina
Salama hariva, azonao atao ve ny manasa ahy ho any amin'ny bilaoginao, ONG iray izahay izay miara-miasa amin'ny ankizy sy ny tanora amin'ny toe-javatra marefo any Arzantina, ary manao hetsika ho an'ireo ankizy sy olona sahirana eny amin'ny manodidina ireo (malalaka tanteraka ireo hetsika ireo) ary izahay Te hiala voly amin'ny milina manipy foam ny mailantsika unionvecinalcabotsanjavier@hotmail.com
9 Jolay 2014 amin'ny 12:10 hariva
Azafady, azoko atao ve ny mampiditra fanontaniana amin'ny bilaogy raha toa ka ny Lauril ao anaty fitoeram-boankazo 3.5 litatra ny habetsaky ny glycerin ary ireo singa 2 hafa dia ohatrinona ny vola azo afangaro amin'ny litatra ho an'ireo 3.5 an'i Lauril ireo
8 Aogositra 2014 amin'ny 5:16 hariva
Tena mahafinaritra ... manana ny ankizy eo amin'ny manodidina ahy ho toy ny adala aho amin'ny zavatra hita, tiako ny manao iray ho an'ny ankizy manodidina ahy ... misaotra mialoha ...
Tiako ny fanasana an'ireo bilaoginao ...
8 Janoary 2015 tamin'ny 6:45 maraina
Salama, tiako ianao hanasa ahy ho any amin'ny bilaoginao hiresaka aminao raha manana fanontaniana aho, misaotra.
22 Jolay 2016 amin'ny 11:29 hariva
Tsara, ny firaisana eo amin'ny butane tee sy ny tap 1/2 ary ny fifandraisana manaraka, ahoana no anaovana azy? Misaotra !!!!
4 septambra 2016 amin'ny 1:09 alina
Tiako ny hanazavanao azy tsara amin'ny sary hahafahana misaotra.
1 Jona 2018 amin'ny 12:22 hariva
Azonao atao ny manasa ahy amin'ny bilaoginao…. Misy manana fampahalalana bebe kokoa ve?
12 Febroary 2020 amin'ny 3:54 maraina
Salama. mandritra ny rano 200 litatra ohatrinona ny habetsaky ny lauryl amin'ny milina busa. Misaotra anao. Uruguay
14 martsa 2020 amin'ny 9:09 hariva
Asao aho ho eo amin'ny sakanao
22 Jona 2020 amin'ny 10:43 hariva
Salama hariva, miasa ve ny bilaogy? Misaotra betsaka